5 Ihe Kpatara Iji Explore Europe Site Train Na December | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Ihe Kpatara Iji Explore Europe Site Train Na December
5 Ihe Kpatara Iji Explore Europe Site Train Na December
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Switzerland, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/12/2019)
E nwere ihe na incredibly emezu banyere silently njuputa nke a ụgbọ okporo ígwè window, adịghị ị na-eche? Ya mere, ichefu banyere ihe nzuzo nche frisks, doro anya Ziplock akpa maka mmiri mmiri, efu nzuzo na ụlọ mposi-erughị busses. E nweghị ụzọ ka mma inyocha Europe karịa ụgbọ okporo ígwè na December. Ebe a na-anyị ihe mere!
1. Explore Europe ụgbọ okporo ígwè na December ị ga-ahụ – ole na ole ndị njem nleta
Ọtụtụ mmadụ na-enubata ewu ewu na ebe n'oge Summer mgbe ha chọrọ inyocha Europe. Otú ọ dị, anwụ na-acha ihu igwe na-eweta na ọ, ndị mmadụ. Nza na nza nke ndị mmadụ! Anyị hụrụ inyocha Europe ụgbọ okporo ígwè na December n'ihi na e nwere nanị ole na ole ndị njem nleta. More mma, obi iru ala, na ohere maka gị!
2. Explore Europe ụgbọ okporo ígwè na na oyi na-esi – ọnụ ala udu
Ihe mere na anyị nwere ọnụ ala udu bụ nnọọ na nke mere 1! Ole na ole ndị mmadụ nhata dị ọnụ ala karịa ihe niile! Anyị na-ekwu okwu dị ọnụ ala karịa hotels na okporo ígwè tiketi n'ala (ezie na eleghị anya ọ bụghị gburugburu Christmas /Afọ ọhụrụ).
A n'ọnụ: Ego nwere ike hụrụ ndị ọzọ n'obodo nta ukwuu dabere na njem. N'ezie, ibu obodo na-adịghị mkpa na-agbalị ka ike iji nweta ke ahịa, ka atụmatụ amamihe ma ọ bụrụ na ị na na na a mmefu ego!
3. Ahịa na-eme ememme
Lelee anyị egwu post on The Best Winter ememme na Europe ma ọ bụrụ na ị na-na-achọ na ihe Ama na anyị na n'elu họpụta mmadụ. Street Markets, kpọmkwem nnọọ n'ebe nile n'oge December. N'ezie, ọ dịla a December omenala kemgbe 1400 si! N'ịbụ na a ụgbọ okporo ígwè pụtara mgbanwe, otú kwesịrị ị na-ekpebi na ị nanị ga-anọ ogologo na onye ị chọta gị n'anya n'ezie, ị pụrụ! Nke bụ ịma mma nke ụgbọ okporo ígwè njem. Ọ bụ ya mere e nweghị ụzọ ka mma inyocha Europe karịa ụgbọ okporo ígwè na December.
Amsterdam Iji London Ụgbọ oloko
Berlin na London Ụgbọ oloko
Ọ bụrụ na ị na mgbe na-ele a Christmas film, e agbụ ka a kpokọtara picture ese nke ikuku. Foto ejighị ya kpọrọ ada snowflakes, ụmụaka na-atụba snoo, icicles, na muffled crunch nke na-eje ije site na oké snow. Na N'ezie, ọkụ na decorations! Enwere n'ebe ndị ọzọ na-ama na ngosipụta ị ga-ahụ na ọtụtụ akụkụ nke Europe.
Florence na Pisa Ụgbọ oloko
Ụzọ ka mma inyocha dị iche iche nri mba nwere na-enye? Explore Europe ụgbọ okporo ígwè na December, na-enwe ohere ịga multiple obodo na otu ụbọchị. Lelee a obodo ahịa na-eme ka ụfọdụ snacks azụ n'ụgbọ okporo ígwè! Ị nwere ike nri ụtụtụ, Lunch, na Nri Anyasị na 3 dị iche iche n'obodo!
NDỤMỌDỤ: na Switzerland na akụkụ nke France, agbalị raclette na fondue, ma nke na-dabeere gburugburu ụtọ cheese. Germany amasị tiekwa mkpu na venison mgbe ọ na-akawanye oyi, na ṅara n'ọkụ chestnuts na a na-ere staple na Christmas ahịa. Echefula ịtụ a n'akụkụ nke mulled mmanya!
Njikere ka akwụkwọ na ụgbọ okporo ígwè na njem nke a ndụ? Great! Gaba na na SaveATrain and enjoy hassle and booking-fee free Train njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/explore-europe-train-december/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#DecemberHolidays Christmas ChristmasbyTrain europetravel Food holidayeurope longtrainjourneys Train Travel traveltips
5 Naa akarị n'ọtụtụ obodo Iji Explore Na France
Best European osimiri inweta Site Ụgbọ oloko
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe
Gịnị Bụ The Best Chiiz Europe nwere na-enye
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe